Waa maxay u-jeedka Sheekh Shariif u tagay Jowhar? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay u-jeedka Sheekh Shariif u tagay Jowhar?
Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa qaatay shahaada musharaxnimo ee kursiga tirsigiisu yahay Hop#146, kasoo degaan doorashadiisu tahay Jowhar.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, haddana ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka, ayaa galabta gaaray magaalada Jowhar ee Xarunka Maamulka Hirshabeelle, halkaasoo la filayo inuu kaga qeyb galo tartanka kursiga ugu sarreeya dalka.
Hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran ayaa ka mid ah, musharrixiinta u taagan tartanka kursiga Hop146, kaasoo Baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay, Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo hadda ah Wasiirka Amniga Gudaha, Xukuumadda Xil-gaarsiinta.
Xogaha ku saabsan HOP146, waxa ay sheegayaan in Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, looga haray tartanka kursigaas, isla-markaana, Wasiirka Amniga Cabdullahi Maxamed Nuur lagu qanciyay, inuu u tanaasulo hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran.
MW Shariif, ayaa noqon doona, Madaxweynihii ugu horreeyay ee inta xilka ka dega kursi Xildhibaan doorasho u gala, sidaasna kaga mid noqda Baarlamaanka Heer Federaal, isla-markaana ka mid noqda Xildhibaannada codka leh, inkastoo Xasan Sheekh yahay Xildhibaan Sharafeed.
Doorashada kursigaan oo qorshuhu ahaa in qabsoonto shalay oo Sabti ahayd, ayaa dib u dhacday, waxaana la filayaa in ay dhawaan qabsoonto, halka sidoo kale indhaha lagu hayo kursiga HOP141, oo musharxiintiisa uu ka mid yahay Maxamed Abuukar Islow, ooh ore ugu fadhiyay.